Fumana Uncedo lokuthiya igama ngeShishini lakho ngeQela eliNcedisayo » Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 11, 2019 NgeCawa, nge-13 kaJanuwari 2019 Douglas Karr
Ngaba ufuna ukuva ibali elothusayo lophawu? Inkampani yakho icwangcisa ukumiliselwa kwayo kwaye ityale imali eyi- $ 150,000 kwidomeyini, igama, kunye nokusungulwa… kuphela ukuze zonke ziwe xa usiva ukuba i-FBI inophando lwegama elifanayo eliya esidlangalaleni. 3VE.
Ayisiyo [i-Arhente okwangoku engenagama] ibinokwenza nantoni na ukuqikelela olo hlobo lomcimbi. Ndiyamangaliswa ngokwenene, nangona kunjalo, kwinani leenkampani ezingazamiyo ukuzithiya amagama. Ndiye ndawazi amashishini ambalwa athe achitha itoni yemali kwiiarhente zokufaka uphawu, kodwa ndafumanisa ukuba igama labo lineentsingiselo ezifanayo kwilizwe liphela, okanye nakwelinye ishishini.
Enye inkampani endandisebenza nayo indiqeshele uncedo lokukhangela izinto eziphilayo. Ingxaki endinayo kwangoko yayikukuba uphawu lwabo lwalufana nevenkile esele ikho kwi-Intanethi kolunye ushishino. Ngenxa yoko, kwabakho isiphithiphithi kwangoko sokuba abantu abanakubafumana kwi-intanethi… nokuba batayipha igama labo leshishini kwiziphumo zokukhangela.
Enye inkampani endincedileyo ibinokwenza uphando olulula kuGoogle ukufumanisa ukuba igama labo lalikufutshane kakhulu nendawo engalunganga. Basazisa amathemba amatsha angonwabisiyo kuba abasebenzi babo bechwetheze i-URL engeyiyo.
Isikwena yindawo yentengiso apho unokufumana khona igama lokushishina ishishini lakho, ukufumana igama lesizinda, kunye nokufumana uncedo ekuphuhliseni ilogo yakho. Babhale incwadi enkulu ye-ebook ekutsala ngamanyathelo ayi-8 wokuchaza ishishini lakho:
Yintoni injongo yeshishini lakho?
Ngoobani abaphulaphuli eliza kusebenzela ishishini lakho?
Yintoni eyahlukileyo ngeshishini lakho? Yintoni ubuntu bakho?
Fumana uncedo kwezinye izinto eziyiliweyo (lowo ngumsebenzi wabo) yokucinga ngegama.
Lahla amagama angenangqondo.
Yenza uhlalutyo lweelwimi ukuqinisekisa ukuba igama lakho alidideki okanye alifanelekanga kwezinye iilwimi.
Kunqande ukumangalelwa ngemicimbi yophawu lwentengiso.
Yiqinisekise ngaphambi kokuba uphile!
Isikwena Unoluntu lwezinto eziyilayo ezikunceda ukuba uze namagama amashishini awodwa. Inkqubo ilungile ngokuthe ngqo:
Qalisa uKhuphiswano lwakho -Gqibezela itemplate yabo ekhawulezayo, elula neprojekthi, kwaye baya kwabelana ngayo noluntu lwethu ngaphezu kwe-70,000 ye-Creatives.
Izimvo ziqala ukugalelwa ngaphakathi -Uya kuqala ukufumana izimvo zamagama-ezenziwe ngokukodwa-ngaphakathi kwemizuzu. Uninzi lwabathathi-nxaxheba lusebenzela wena ngaxeshanye! Ukhuphiswano oluqhelekileyo lokuqamba amagama lufumana izimvo zamagama aliqela. Zonke izimvo zitshekishwa ngokuzenzekelayo ukufumaneka kwe-URL.
Sebenzisana kunye noNxibelelwano -Bona lonke ungeniso oluvela kwideshibhodi yakho yokhuphiswano. Linganisa amangenelo, shiya amagqabantshintshi abucala, kwaye uthumele imiyalezo esidlangalaleni, ekhokelela kwinkqubo kwigama elifanelekileyo
Qinisekisa i -Khetha igama lakho ngokuzithemba. Inkqubo yethu yokuqinisekisa eyahlukileyo ibandakanya ukuvavanywa kwesizinda, uvavanyo lomngcipheko wophawu lwentengiso, uhlalutyo lweelwimi, kunye novavanyo lwabaphulaphuli abaqeqeshiweyo.
Khetha ophumeleleyo! - Nje ukuba ukhuphiswano lwakho luphele, bhengeza ophumeleleyo-kwaye ubhalise igama. Ungabuyela kwi-Squadhelp ukumilisela i-logo yoyilo okanye iprojekthi ye-Tagline yegama lakho.
Qalisa uKhuphiswano lwamagama Jonga indawo yabo yentengiso
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa eyethu ziqhagamshelwano ye-Squadhelp kule posi.
tags: Ukuthengisa ishishini lakhoUkuthiya ishishini lakho
Abantu vs iiChatbots: Ngubani oza kuKhathalela abaThengi?